ခုနှစ်ရက် သားသမီး များအတွက် ၁ ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ( ၁၃ . ၂. ၂၀၂၀ မှ ၁၉ . ၂. ၂၀၂၀ အထိ ) – Shwe Likes
ခုနှစ်ရက် သားသမီး များအတွက် ၁ ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ( ၁၃ . ၂. ၂၀၂၀ မှ ၁၉ . ၂. ၂၀၂၀ အထိ )
Shwe | February 13, 2020 | Astrology | No Comments
ခုနှစ်ရက် သားသမီး များအတွက် ၁ ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ( ၁၃ . ၂. ၂၀၂၀ မှ ၁၉ . ၂. ၂၀၂၀ အထိ ) ကံဇာတာအဆိုးအကောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ..
ဒီ ကာလ အတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ အခွင့် အရေးကောင်းတွေ လက်ဝယ်ရောက်ရှိလာမည် ။ စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်း မှုတွေကို ရလာမယ့်ကာလပါ ပဲ။ အလုပ်အတွက် ကံကောင်းမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်ပြေမှု တွေ့ကြုံ နိုင်တဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ် ။ လူမှုရေးကိစ္စအတွက် ပင်ပန်းမယ်။ ကိုယ့်သားချင်းတွေကြောင့် အနှောက်အယှက်ကြုံတတ်ပါ တယ်။လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လို့ ခက်ခဲနေရင်တောင် ကူညီအကြံဉာဏ်ပေးမယ့် ဆရာသမားတွေ နဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ် ။ မိမိ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီကာလမှာစတင်သင့်ပါတယ်။
ဒီကာလ အတှငျးလုပျငနျးဆောငျရှကျဖို့ အခှငျ့ အရေးကောငျးတှေ လကျဝယျရောကျရှိလာမညျ ။ စိတျကွညျလငျအေးခမျြး မှုတှကေို ရလာမယျ့ကာလပါ ပဲ။ အလုပျအတှကျ ကံကောငျးမှုတှေ ပျေါပေါကျလာပွီး ဘာပဲလုပျလုပျ အဆငျပွမှေု တှကွေုံ့ နိုငျတဲ့ ကာလဖွဈပါတယျ ။ လူမှုရေးကိစ်စအတှကျ ပငျပနျးမယျ။ ကိုယျ့သားခငျြးတှကွေောငျ့ အနှောကျအယှကျကွုံတတျပါ တယျ။လုပျကိုငျဆောငျရှကျလို့ ခကျခဲနရေငျတောငျ ကူညီအကွံဉာဏျပေးမယျ့ ဆရာသမားတှေ နဲ့ကွုံရတတျပါတယျ ။ မိမိ အကောငျအထညျဖျောခငျြတဲ့ကိစ်စမြိုးတှဒေီကာလမှာစတငျသငျ့ပါတယျ။
၇ ရက် သားသမီးများ တစ်ပတ်စာေ ဟာစာတမ်း(27.2.2020 မှ 4.3.2020 အ ထိ)
၇ ရက် သားသမီးများ တစ် ပတ်စာဟောစာတမ်း (27.2.2020 မှ 4.3.2020 အ ထိ)
မိတ်ဆွေ တို့ ချိန် ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ် စာ မနောမယေ ဟာစာတမ်း(26.2.2020 TO 3.3.2020)
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အတွက် တစ်ပါတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း(20.2.2020 မှ 26.2.2020 အထိ)
ဖေ့ ဘုတ်ခ် သုံးတာကို ရပ်ဆိုင်းမယ်လို့ကြေညာပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် အကောင့် DE သွားတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို